ICymbalta vs.Lyrica: Umehluko nokuthi yikuphi okungcono kuwe - Izidakamizwa Vs. Umngani | Julayi 2021
Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izindaba Cindezela Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout Izilwane Ezifuywayo Izindaba, Wellness Inkampani Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani
Main >> Izidakamizwa Vs. Umngani >> ICymbalta vs.Lyrica: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
ICymbalta vs.Lyrica: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
Izidakamizwa kuqhathaniswa ne-Drug Cymbalta neLyrica zombili zivame ukunikezwa ukwelapha ubuhlungu bemisipha nezinzwa. Siziqhathanisa, ngakho-ke unganquma nodokotela wakho ukuthi iyiphi indlela engcono kakhulu kuwe.
ICymbalta neLyrica ziphatha izimo ezahlukahlukene zezempilo, kepha zombili izindlela zokwelashwa ezivunyiwe zesifo sikashukela semizwa neuropathy kanye ne-fibromyalgia. ICymbalta iyi-serotonin norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) ngenkathi iLyrica iyi-analgesic ne-anticonvulsant. Zisebenza ngokuhlukile kepha zombili zingasetshenziswa ukwelapha ubuhlungu bemisipha nezinzwa. Sebenzisa lo mhlahlandlela ukuqhathanisa iCymbalta neLyrica futhi ufunde kabanzi mayelana nokuthi basebenza kanjani, izimo abazelapha, kanye nemiphumela yazo emibi engaba khona.
Uyini umehluko omkhulu phakathi kweCymbalta neLyrica?
ICymbalta (i-duloxetine) ngumuthi kadokotela osetshenziswayo ukwelapha ukungezwani okuhlukahlukene okubandakanya i-diabetic neuropathy ne-fibromyalgia. Mhlawumbe yaziwa kakhulu ngenkomba yayo yokwelapha ukucindezeleka okukhulu kanye nokukhathazeka okujwayelekile. Ihlukaniswa njenge-serotonin norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) futhi isebenza ngokwandisa i-serotonin ne-norepinephrine, ama-neurotransmitter amabili aziwa ngendima yawo ekuguqukeni nasekuziphatheni. Indima yayo ekukhululekeni kobuhlungu kucatshangwa ukuthi kungenxa yesenzo sayo kwi-serotonin ne-norepinephrine.
ngingawanyusa kanjani amazinga wami we-potassium?
Amanye ama-SNRI afana noPristiq (desvenlafaxine), i-Effexor (venlafaxine), ne-Savella (milnacipran) awavunyelwa izinkomba ezihlobene nobuhlungu be-neuropathic. ICymbalta itholakala kumaphilisi omlomo ngamandla ka-20 mg, 30 mg, 40 mg, no-60 mg.
ILyrica (i-pregabalin) ngumuthi kadokotela futhi ovunyelwe ekwelapheni i-neuropathy yesifo sikashukela kanye ne-fibromyalgia. ILyrica futhi inezinye izinkomba zokuphazamiseka njengokuhlaselwa kanye nezinye izinhlobo zobuhlungu be-neuropathic. ILyrica ihlukaniswa njenge-analgesic, noma i-reliever pain, kanye ne-anticonvulsant. ILyrica isebenza ngokwehlisa ukudluliswa kwesiginali ezindleleni zezinzwa. Ifana ngokwamakhemikhali nomunye umuthi, iNeurontin (gabapentin).
ILyrica ithathwa njengezinto ezilawulwayo yiDrug Enforcement Agency (DEA) ngenxa yamandla ayo okuncika nokuhlukumeza. ILyrica ingaphansi kwemithetho yenhlangano nesifundazwe yokubeka izinto ezilawulwayo.
ILyrica iyatholakala njenge-capsule yomlomo ezinhlobonhlobo zamandla kufaka phakathi i-25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, kanye ne-300 mg. Iphinde itholakale njengesisombululo somlomo esingu-20 mg / ml kanye namaphilisi akhishwe enwetshiwe ku-82.5 mg, 165 mg, naku-330 mg.
Umehluko omkhulu phakathi kweCymbalta neLyrica
Isigaba sezidakamizwa SNRI I-analgesic / anticonvulsant
Ngubani igama elijwayelekile? I-Duloxetine I-Pregabalin
Izidakamizwa zingena ngaziphi izinhlobo? I-Capsule Ama-capsule akhishwa ngokushesha futhi enwetshiwe, isisombululo somlomo
Uyini umthamo ojwayelekile? 60 mg kanye ngosuku 50- 100 mg kathathu nsuku zonke
Ubani ovame ukusebenzisa umuthi? Intsha kanye nabantu abadala Izingane nentsha (ukuquleka kuphela), abantu abadala
Izimo eziphathwa yiCymbalta neLyrica
ICymbalta isebenzisa okujwayelekile ebangeni elibanzi lezinkomba. Isetshenziselwa ukwelashwa kwesifo esikhulu sokucindezeleka kanye nesifo sokukhathazeka esijwayelekile. Kuyakhonjiswa nasekwelapheni i-fibromyalgia, ubuhlungu obuhambisana nesifo sikashukela se-neuropathy, kanye nobuhlungu obungapheli obuhambisana nokuphazamiseka kwemisipha njenge-osteoarthritis nobuhlungu obungapheli obuya emuva. I-Cymbalta kwesinye isikhathi isetshenziswa ngaphandle kwelebuli ukwelapha ukucindezelwa kokuchama kokuchama (i-SUI). Ukusetshenziswa okungekho kwelebula kusho ukusetshenziswa kwenkomba lapho kungavunyelwe khona yi-Food and Drug Administration (FDA).
ILyrica isetshenziswa njenge-analgesic ekuphazamisekeni okuhlobene nobuhlungu be-neuropathic njenge-diabetic neuropathy, i-postherpetic neuralgia, i-fibromyalgia, nokulimala kwentambo yomgogodla. ILyrica nayo ivunyelwe njengokwelashwa okuhambisanayo kokuquleka okuyingxenye. ILyrica inokusetshenziswa okumbalwa kwelebula, kufaka phakathi ukuphazamiseka kokukhathazeka komphakathi kanye nesifo sokukhathazeka esijwayelekile.
Isimo ICymbalta ILyrica
Ubuhlungu bezinzwa zesifo sikashukela Yebo Yebo
Ubuhlungu obuhambisana ne-neuralgia ye-postherpetic Akunjalo Yebo
Ubuhlungu obuhambisana nokulimala komgogodla Akunjalo Yebo
Ubuhlungu obungapheli bemisipha Yebo Akunjalo
I-Fibromyalgia Yebo Yebo
Ukwelashwa okuhlangene kokuquleka okuyingxenye Akunjalo Yebo
Ukucindezeleka okukhulu Yebo Akunjalo
Isifo sokukhathazeka esijwayelekile Yebo Ngaphandle kwelebula
Inkinga yokukhathazeka komphakathi Akunjalo Ngaphandle kwelebula
Cindezela ukungahambisani nomchamo Ngaphandle kwelebula Akunjalo
Ngabe iCymbalta noma iLyrica isebenza kangcono?
Umtholampilo ongahleliwe icala eyaziwa ngokuthi yi-Combo-DN Study yaqhathanisa imiphumela yomthamo omkhulu weCymbalta neLyrica kuphela, kanye nokuhlanganiswa kwabo ezigulini okwakungasebenzi i-monotherapy kuzo ekwelapheni ubuhlungu obuhlobene ne-neuropathy yesifo sikashukela. Lolu cwaningo luthole ukuthi ukuthuthuka kobuhlungu bekufana nasezigulini eziseCymbalta kanye, eLyrica kuphela, nasekuhlanganisweni kwalokhu okubili. Ngenkathi yehluleka ukukhombisa ukuthi noma yiliphi iqembu elilodwa lokwelashwa laliphakeme, lanikeza ubufakazi bokuthi zonke izindlela ezintathu zokwelashwa zaziphephile futhi zisebenza ngobuhlungu obuhlobene ne-neuropathy yesifo sikashukela.
Ukubheka okuhlukile funda uphethe ngokuthi iCymbalta ingasebenza kakhulu ekwelapheni ubuhlungu be-neuropathic obuhlobene ne-neuropathy yesifo sikashukela, yize iLyrica ingaba nokubekezelelana okungcono kweziguli ngokwemiphumela yecala lazo.
Lokhu akuhloselwe ukuba kube iseluleko sezokwelapha. Udokotela wakho kanye neqembu lakho lokunakekelwa kwezempilo kuphela elinganquma ukuthi yikuphi ukwelashwa okungcono kakhulu kuwe nesimo sakho.
Ukuqhathaniswa kanye nezindleko zokuqhathaniswa kweCymbalta vs.Lyrica
ICymbalta ngumuthi kadokotela ojwayelekile owenziwa imishuwalense yezentengiso neyeMedare. Ngaphandle komshuwalense, ukunikezwa kwenyanga eyodwa kungakubiza u- $ 470. Ngefayela le- isigqebhezana nge-generic Cymbalta (Duloxetine Hcl), izindleko zakho zizungeze u- $ 10.
ILyrica ngumuthi kadokotela ohlanganiswa yizinhlelo zombili zomshuwalense wezohwebo kanye noweMedicare ngendlela ejwayelekile. Ukutholakala kwenyanga eyodwa kweLyrica kungakubiza cishe u- $ 287 ngaphandle komshwalense. Isigqebhezana se- ifomu elejwayelekile kunganciphisa izindleko zakho zibe ngaphansi kwama- $ 15.
Ubuningi 30, 60 mg amaphilisi 30, 75 mg amaphilisi
Izindleko ze-SingleCare $ 8 + $ 14 +
Imiphumela emibi ejwayelekile yeCymbalta vs.Lyrica
Amaphrofayli wemiphumela eseceleni yeCymbalta neLyrica ayahluka komunye nomunye ngokuphawulekayo kwezinye izici. Isibonelo, i- umkhiqizi yeCymbalta ibike ukuthi inani elikhulu leziguli lizwa ikhanda ngesikhathi sokuhlolwa komtholampilo, ngenkathi lo mcimbi omubi ungabikelwanga iLyrica nhlobo. Ukujuluka nokuhuda nakho kubikwe ngeCymbalta kepha hhayi ngeLyrica.
ungayisebenzisa kanjani i-apula cider uviniga ukunciphisa i-cholesterol
ILyrica ihlotshaniswa nesiyezi esikhulu nokulala, futhi lokhu kungenza kube nzima ukushayela nokwenza imisebenzi yansuku zonke. ILyrica iphinde ixhunyaniswe nombono ofiphele, ukuzuza kwesisindo, nokugcinwa koketshezi okungathinta nekhwalithi yempilo.
Lokhu akuhloselwe ukuthi kube luhla olubandakanya konke lwemiphumela emibi. Uma uhlangabezana nalezi noma eminye imiphumela emibi futhi iyahlupha noma ingabekezeleleki, kufanele uthintane nommeli wakho.
Isicanucanu Yebo 2. 3% Akunjalo n / a
Umlomo owomile Yebo 13% Yebo 5%
Ukujuluka Yebo 6% Akunjalo n / a
Uhudo Yebo 9% Akunjalo n / a
Ukuqunjelwa Yebo 9% Yebo 4%
Ukuqhuma kwesisu Akunjalo n / a Yebo amaphesenti amabili
Isiyezi Yebo 9% Yebo amashumi amabili nanye%
Ukozela Yebo 10% Yebo 12%
Ubuhlungu bekhanda Yebo 14% Akunjalo n / a
Ukwanda komfutho wegazi Yebo amaphesenti amabili Akunjalo n / a
Ukwehla kwesifiso sokudla Yebo 7% Akunjalo n / a
I-edema yomngcele Akunjalo n / a Yebo 9%
Ukuzuza kwesisindo Akunjalo n / a Yebo 4%
I-Edema Akunjalo n / a Yebo amaphesenti amabili
I-Ataxia Akunjalo n / a Yebo 3%
I-Vertigo Akunjalo n / a Yebo 3%
Ukudideka Akunjalo n / a Yebo amaphesenti amabili
Umbono ofiphele Akunjalo n / a Yebo 4%
Umthombo: ICymbalta ( I-DailyMed I-Lyrica ( I-DailyMed )
Ukusebenzisana kwezidakamizwa kweCymbalta vs.Lyrica
ICymbalta kufanele isetshenziswe ngokucophelela nezinye izidakamizwa ze-serotonergic. I-serotonin eyandisiwe ixhunyaniswe ne-serotonin syndrome. I-Serotonin syndrome ibonakala ngezimpawu ezinjengekhanda, ukudideka, ukujuluka, isicanucanu, nohudo. Izidakamizwa zeSerotonergic zifaka phakathi i-serotonin reuptake inhibitors ekhethiwe (i-SSRIs) efana ne-fluoxetine noma i-paroxetine, i-herbal engeza iSt. ILyrica ayinakho ukuxhumana nezidakamizwa ze-serotonergic.
Kokubili iCymbalta neLyrica kufanele kusetshenziswe ngokuqapha nge-tricyclic antidepressants efana ne-amitriptyline ne-nortriptyline. Kufanele zisetshenziswe ngokucophelela noma ngokugwenywa ngama-monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) afana ne-selegiline.
Lokhu akuhloselwe ukuthi kube uhlu olubanzi lokusebenzisana kwezidakamizwa. Kufanele uthintane nosokhemisi noma udokotela wakho ukuthola uhlu oluphelele.
yini i-hct auto ekuhlolweni kwegazi
Izidakamizwa Isigaba Sezidakamizwa ICymbalta ILyrica
I-Oxitriptan I-5HT Agonist / Triptans (ama-antimigraine agents) Yebo Akunjalo
I-Methylphenidate Ama-Amphetamines Yebo Yebo
I-Aripiprazole I-Antipsychotic Yebo Yebo
I-Diclofenac Izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala (ama-NSAID) Yebo Akunjalo
I-Buspirone Ukukhathazeka ngokweqile Yebo Yebo
I-Escitalopram Ama-SSRIs Yebo Akunjalo
I-Hydroxychloroquine Aminoquinolone /I-Antimalarial Akunjalo Yebo
I-Linezolid Imithi elwa namagciwane Yebo Akunjalo
I-Metaxalone Iziphumuli zemisipha Yebo Yebo
I-Pimozide I-Antipsychotic Akunjalo Yebo
I-Rasagiline I-Monoamine oxidase inhibitor (MAOI) Yebo Yebo
ISt. John's Wort Ukwengeza ngamakhambi Yebo Akunjalo
I-Tramadol Ukudambisa izinhlungu ze-opiate Yebo Yebo
Izexwayiso zeCymbalta neLyrica
ICymbalta ngeke ikhiqize ukuthethelelwa ngokushesha kobuhlungu, ukuphazamiseka kwengcindezi, noma ukukhathazeka. Kuzothatha okungenani amasonto amabili ukubona noma yiluphi ushintsho ezigulini eziningi, futhi kuze kube amasonto amane kuya kwayisithupha ukuthola umphumela ogcwele womuthi. Ungayeki ngaphambi kwesikhathi imishanguzo yakho unenkolelo yokuthi ayisebenzi ngaphandle kokukhuluma nommeli wakho.
Iziguli ezinokudangala zingathola ukwanda kokucindezeleka noma imicabango yokuzibulala noma ngabe ziyayisebenzisa yini imishanguzo yokulwa nokudangala. Lezi zimo zingase zibe zimbi kuze kutholakale ukuxolelwa. ICymbalta kungakhuphula umbono wokuzibulala nemicabango phakathi kwentsha nasebekhulile, ikakhulukazi ezigabeni zokuqala zokwelashwa. Lezi ziguli kumele zibhekwe ngeso lokhozi uma lokhu kwelashwa kubonakala kudingekile ngokwezokwelapha. Ukushintshwa kokwelashwa kungadingeka uma izimpawu zivela kungazelelwe noma ziba zimbi kakhulu.
Izidakamizwa ze-antiepileptic, njenge ILyrica , ziye zahlanganiswa nemibono yokuzibulala. Iziguli eziqala iLyrica kufanele zibhekwe ukuvela noma ukuwohloka kokucindezeleka.
Kube khona imibiko yokwehluleka kwesibindi, kwesinye isikhathi okubulalayo, neCymbalta. Lawa macala angabonisa ubuhlungu besisu kanye nama-enzyme aphakeme wesibindi nge-jaundice noma ngaphandle kwayo. Ukuphuza utshwala kungakhuphula le ngozi, ngakho-ke le nhlanganisela kufanele igwenywe.
ILyrica yinto elawulwayo ngenxa yekhono layo lokusebenzisa kabi nokuhlukumeza. Ukuqapha kufanele kusetshenziswe ngaphambi kokuqala ukwelashwa kwamaNgoma esigulini esinomlando womuntu siqu noma womndeni wokusebenzisa kabi izidakamizwa.
Imibuzo ebuzwa njalo ngeCymbalta vs. Lyrica
ICymbalta umuthi kadokotela odambisa ukucindezelwa osetshenziswa ekwelapheni ukucindezeleka okukhulu, isifo sokukhathazeka esijwayelekile, kanye nezinkinga ezahlukahlukene zobuhlungu be-neuropathic kanye ne-musculoskeletal. ICymbalta isekilasini lezidakamizwa ezaziwa njenge-serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors ekhethiwe (SNRIs). ICymbalta itholakala njenge-capsule yomlomo ku-20 mg, 30 mg, naku-60 mg amandla.
ILyrica ngumuthi kadokotela ohlukaniswa njenge-analgesic kanye ne-anticonvulsant. Isetshenziselwa ukwelapha ukuquleka kanye nobuhlungu obuhlobene nokuphazamiseka kwe-neuropathic kanye ne-fibromyalgia. ILyrica itholakala ngamandla ahlukahlukene kuwo womabili amaphilisi asheshayo nakhishwa, kanye nesisombululo somlomo.
Ngabe iCymbalta neLyrica ziyefana?
Ngenkathi iCymbalta neLyrica zilusizo ezinhlotsheni ezifanayo zezifo ezihlobene nobuhlungu, azifani. ICymbalta iyi-antidepressant ezenzo zayo zixhunyaniswa ngezenzo zayo kwi-serotonin ne-norepinephrine. ILyrica iyi-analgesic ne-anticonvulsant enezenzo ezinciphisa ukudluliswa kwesiginali yezinzwa.
Ngabe iCymbalta noma iLyrica ingcono?
ICymbalta neLyrica bobabili bakhonjisiwe ukuthi baphephile futhi basebenza bobabili njenge-monotherapy kanye nokwelashwa kokuhlanganiswa. Yikuphi ukwelashwa okulungele wena okuzoya ngesimo sakho, umlando wakho wezokwelapha, nokuthi udokotela wakho ucabanga ukuthi kukulungele kangakanani.
Ngingayisebenzisa iCymbalta noma iLyrica ngenkathi ngikhulelwe?
I-FDA ibheka isigaba seCymbalta sokukhulelwa isigaba C, okusho ukuthi bekungekho izifundo zomuntu ezanele zokunquma ukuphepha. NgeCymbalta, imiphumela engeyona eye-teratogenic iye yabonwa ezinganeni ezisanda kuzalwa kulandela ukuphathwa kweCymbalta ngenkathi ikhulelwe. Lokhu kubandakanya ukucindezeleka kokuphefumula, ubunzima bokudla, nokuthuthumela. Ngokuvamile, noma yisiphi isidakamizwa kufanele sisetshenziswe kuphela ngenzuzo kumama ngokusobala sidlula ubungozi enganeni.
Ngingasebenzisa iCymbalta noma iLyrica ngotshwala?
Iziguli kufanele zikugweme ukuphuza kakhulu utshwala uma zithatha iCymbalta noma iLyrica. Utshwala bungakhuphula imiphumela enobuthi kuyo yomibili le mithi futhi bungadala ukukhubazeka okukhulu kwengqondo. NgeCymbalta ikakhulukazi, utshwala bandisa izehlakalo zokukhubazeka kwesibindi.
I-Dulera vs Advair: Umehluko Omkhulu nokufana
Imibuzo eyi-9 ongayibuza udokotela uma umnyama, ungowomdabu, noma ungumuntu onebala
Ingabe i-hydroxyzine iyefana ne-xanax?
okufanele ukwenze ngamabhodlela amaphilisi asetshenzisiwe
ingakanani i-tylenol 3 yokukhuphuka
yini ama-multivitamin amahle kakhulu emadodeni
yenzani i-d3 emzimbeni